ဖယောင်းတိုင်ဖြေရှင်းချက် | Winby Industry & Trade Limited
WINBY စက်မှုလုပ်ငန်း & ကုန်သွယ်မှု ကန့်သတ်
အနှစ် 20 အတွက် Professional ထုတ်လုပ်မှုဖယောင်းတိုင်
အနှစ် 20 ကျော် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဖယောင်းတိုင် ပေးသွင်းသူ
မွှေးပျံ့သောဖယောင်းတိုင်များသည် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ငြိမ်သက်စွာဖတ်နေချိန် သို့မဟုတ် လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကို ဖြည်းညှင်းစွာ မြည်းစမ်းကြည့်သည်ဖြစ်စေ ဘဝ၏အရသာကို ချိန်ညှိနိုင်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည် ။ မွှေးရနံ့သင်းသင်း၊ ဒုက္ခအားလုံးကို မေ့ပျောက်ပြီး လူတစ်ကိုယ်လုံး စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ လှပတဲ့ စိတ်ခံစားချက်.
မင်္ဂလာဆောင်ဖယောင်းတိုင်----မွှေးရနံ့က ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သမုဒ္ဒရာ၏ရနံ့သည် အလွန်နွေခေါင်လှသည်။ Citrus၊ floral နှင့် vanilla တို့၏ ရနံ့များ စုံလင်စွာ ရောစပ်ပြီး Bali၊ ပူနွေးသော ပင်လယ်လေနှင့် နေရောင်ခြည်တို့ကို သတိရစေသည်။ မီးထွန်းတာမျိုးယန်းကီးစတိုင်ဖယောင်းတိုင် အဖြစ် မင်္ဂလာဆောင်ဖယောင်းတိုင် မင်္ဂလာပွဲတစ်ခုမှာ သင့်ကို အချစ်ရေးသာမက အနာဂတ်အတွက်ပါ ပျော်ရွှင်မှုတွေ အပြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ မွှေးရနံ့က မင်္ဂလာပွဲအတွက် ချိုမြိန်တဲ့အမှတ်တရတွေကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ဤဖယောင်းတိုင်ကို အမှတ်တရအဖြစ် ယူဆောင်သွားပါက လက်ဆောင်ရရှိသော ဧည့်သည်များသည် ချိုမြိန်မှုကို သေချာပေါက် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်၊ နေရန်အကြာဆုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့်၊ လှပနွေးထွေးရမည်။ သင့်အိမ်ကို လှပအောင်လုပ်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ရနံ့ကုထုံး ဖယောင်းတိုင်, ကဲ့သို့ ဖန်နံ့သာဆီ. ဒီဖယောင်းတိုင်တွေကို အားလုံးနဲ့တွဲသုံးတယ်။ ပဲဖယောင်း ၌ ဖန်ဖယောင်းတိုင်အိုး, အနံ့ကြိုက်တာရွေးပါ။ ဘီစကွတ် သို့မဟုတ်လာဗင်ဒါဖယောင်းတိုင် အနံ့က အရမ်းမွှေးပြီး လုံးဝ မလန်းဆန်းဘူး။ နွေးထွေးတဲ့ ဆောင်းရာသီ ပိတ်ရက်တွေမှာ အိမ်မှာ စောင်ခြုံထားတယ်၊ ချိုမြိန်တဲ့ စာသားလေးတွေ ဖတ်ပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး မွှေးကြိုင်တဲ့ မွှေးရနံ့တွေနဲ့ အိပ်ဖို့ အလွန်သင့်တော်ပါတယ်။ မီးထွန်းပြီးနောက် အခန်းသည် သာယာသောရနံ့များဖြင့် ပြည့်နှက်နေပြီး နွေးထွေးမှုကို ခံစားရစေသည်။
နှိပ်ပါ--A08M A07M A08M
Yoga နှင့် Massage Candle--- စိတ်အေးလက်အေး ဖယောင်းတိုင်များ
ယောဂကျင့်ခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏လေထုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပို၍ထူးခြားသောကြောင့် သင်အလင်းရောင်ရနိုင်သည်။ မွှေးပျံ့သောဖယောင်းတိုင်များ ယောဂကျင့်စဉ်။ ယောဂကို တစ်ယောက်တည်း လေ့ကျင့်တဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်း လေ့ကျင့်ရုံနဲ့ အထီးကျန်တယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ သုံးလို့လည်းရပါတယ်။သံဖြူ ဖယောင်းတိုင်များ ယောဂ romantic ဖြစ်အောင်။ ရနံ့ဖယောင်းတိုင် သင့်ယောဂကျင့်စဉ်အတွက် ရိုမန်းတစ်အငွေ့အသက်ကို ယူဆောင်လာပါ။ နှိပ်နယ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အနှိပ်ဖယောင်းတိုင်သဘာဝအတိုင်းသုံးတယ်။ နှိပ်နယ်ဖယောင်း သို့မဟုတ် 100% သဘာဝပဲပိစပ်ဖယောင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်ကို ပြေလျော့စေရုံသာမက အသားအရေကိုပါ လှပစေကာ ထူးခြားသော ဘဝအရသာကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နှိပ်ပါ---A06M D25P L01H
ဟိုတယ်ရနံ့မွှေးဆီမီးနှင့် Reed Diffuser
ရေချိုးခန်း၏ထူးခြားသောအနံ့နှင့်အတူဖယ်ရှားပစ်ရရန် ဆီမွှေး၊ လန်းဆန်းပြီး လန်းဆန်းတဲ့ ရနံ့ကို ရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အကြောင်းဖယောင်းတိုင်ပုံး, သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သံဖြူအိုး သို့မဟုတ် ဖန် ဖယောင်းတိုင်ပုလင်း. အသီးအနှံ သို့မဟုတ် citrus စီးရီး၏ရနံ့သည် ထူးခြားသောအနံ့ကို ဖယ်ရှားရာတွင် ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ရင်ခုန်စရာအရသာကို သက်သာစေရန်နှင့် ရေချိုးရာတွင် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ကုစားမှုဖြစ်လာစေရန် ရေချိုးစဉ်တွင်လည်း ရနံ့ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနိုင်သည်။
Reed diffuser ၊ မွှေးရနံ့ကို သူ့အလိုလို ထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီး၊ အလွန်လန်းဆန်းပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လေထုကို ဖန်တီးပေးပြီး ခံစားချက်တွေကို ထူထောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤအရာအားလုံးသည် မြင့်မြတ်သော၊ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ထူးခြားလှသည်။
နှိပ်ပါ----A03P XP01 H12
DIY ဖန်နံ့သာဆီ--- သင်ကိုယ်တိုင် ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ခြင်း။
အထူးနေ့ထူးနေ့မြတ်မှာ သူ/သူမကို ဘယ်လိုလက်ဆောင်ပေးမလဲ။ အိမ်လုပ်ရနံ့ဖန် ဖယောင်းတိုင်များ အဖုံးနှင့်အတူ သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပစ္စည်းများအားလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ရနံ့ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ခြင်း။. ပဲပိစပ်ဖယောင်း, မွှေးရနံ့ဆီ, ဖယောင်းတိုင်အိုး, အဖုံးပါသော ဖယောင်းတိုင်ပုလင်း (matte glass jar or frosted glass jar), ဖယောင်းတိုင်မီးဖို, wick စတစ်ကာများ, wick centering ကိရိယာ, အိုး၊ ဖယောင်းတိုင်ဆိုးဆေး။ နှင်းဆီ၊ လာဗင်ဒါ၊ သရက်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီ အစရှိတဲ့ ရနံ့တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ရနံ့တိုင်းတွင် ဤထူးခြားသော အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သင့်အမြတ်နိုးဆုံးသော ကောင်းချီးကို ကိုယ်စားပြုသည့် အခြားသူများကို လက်ဆောင်အဖြစ် သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ထားသော ဆီမွှေးတစ်ချောင်းပေးပါ။
နှိပ်ပါ----KA06M A09T ဖယောင်းတိုင်မီးဖို ပဲဖယောင်း ဖယောင်းတိုင်ကိရိယာများ ဗဟိုပြုကိရိယာ
သတင်းလွှာ အပ်ဒိတ်များအတွက် စောင့်မျှော်နေပါ။
© မူပိုင်ခွင့် - 2019-2021 : All Rights Reserved.